किन खाने फर्सी ? – Tufan Media News
किन खाने फर्सी ?
३ बैशाख २०७८, शुक्रबार २१:३५
एजेन्सी । फर्सी तरकारीको एक प्रकार जुन लहरामा फल्छ। प्रायः सबै ठाउँमा उत्पादन हुन्छ। फर्सीको लहराको मुन्टा, पात, फूल र फल सबै उपयोगी हुन्छ ।
फर्सीमा भिटामिन ‘ए’ प्रशस्त पाइन्छ । आवश्यक पोषकतत्व फर्सीमा पाइन्छन् ।कमलपित्त, क्षयरोग, बढी तिर्खा लाग्ने, कलेजोमा खटिरा जास्ता रोगलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउछ कब्जियत भएमा तथा टाउको दुखेमा पनि फाइदा गर्छ ।
पायल्स र शरीरभित्र जलन हुँदा पनि फलदायी हुन्छ ।गाईवस्तुमा थुनेलो रोग लागेमा पाकेको फर्सीको भेट्नु पानीमा घोटेर लगाउँदा ठिक हुन्छ । यसको लेपले विषालु किराको विष पनि हट्छ ।
फर्सीको बियााले शरीरमा भएको पत्थरी निकाल्छ ।फर्सीको बियाँ छोडाई यसलाई पिँधेर ओठमा लगाउँदा ओठ फुटेको, चिरिएको तथा सुख्खापन भएको निको हुन्छ ।निन्द्रा नलाग्ने रोगमा पनि यसले फाइदा गर्छ ।रुखो कपाललाई नरम बनाउँछ ।फर्सीका १०–१५ बियाँ नियमित खाँदा छाती पोलेको ठीक हुन्छ ।
हिमालयका जहाजमा राखियो हार्ट
अण्डाको कुन भाग खादा
उपचार नपाउँदा जिउँदो ला’श
फार्मेसीमा बील तीर्न नसक्दा
कोरोनासँग लड्दा लड्दै छोरीलाई
सङ्क्रमणबाट एकै परिवारका तीनको